Obi ụtọ 500th Post gị! | Martech Zone
Tuzdee, Machị 27, 2007 Sunday, October 4, 2015 Douglas Karr
Ọ dị mma, ọ bụ karịa 500 posts mana echefuru m na atụfuru ya. Anọla m na ịde blọgụ maka ihe dịka ọnwa 8 ma emeela nke ọma.
Technorati m, Ike 150 na Alexa ọkwa dị elu karịa ebe m chere na ha ga-adị. Ana m eme ezigbo ego na blọọgụ - ọ bụghị site John Chow okwa, ma zuru iji dobe m na agwa m no-fat-no-whip-grande-mocha-starbucks.
Kedu ka m mere? Ọrụ siri ike. (Pịa njikọ ahụ: Mgbe ọ bụla m na-ele Loren, achọrọ m ịga egwuregwu Yankees, rie ụfọdụ nkịta, ma tụba biya biya na ụfọdụ ndị Red Sox fans!)
Ebe ọ bụ na Loren jụrụ, ana m agbago na 3AM (mgbe ụfọdụ abalị niile) ịde blọgụ. Anọ m na Indianapolis ya mere enweghị m ohere ịpụ na ụmụnne m Silicon Valley - mana ọ tụrụ m n'anya etu m siri nọrọ na kọntaktị na n'elu ọnọdụ site na kewaa oge m n'etiti nyocha, ule, nkekọrịta, ijikọ, ịbụ mkpali, ma nwee mmụọ.
Ihe Nlereanya: N'abalị ụnyaahụ na taa ọ na-achọpụta Geo Microformats na itinye ha n'ọrụ Adreesị Adreesị maka enyi ọhụrụ Andy si United Kingdom.
Ekwesiri m ime emume mana aga m echefu oriri a n'abalị a. Ikekwe m ga-anwale ma kwado ihe maka blog post 1,000… Amaghị m. Amaara m na nnukwu mgbanwe dị na ndụ m n'ihi ikike m chọtara iji jikọta ndị mmadụ na teknụzụ site na blọgụ m. Adị m mma mgbe niile ịchọta na ịkekọrịta ozi. The blog dị nnọọ nyere zuru okè na-ajụ n'ụzọ dị irè iji ruo ọtụtụ ndị mmadụ. Enweela m ihe karịrị 100,000 nke gị… 5,500 ndị mmadụ n'ụbọchị m kachasị mma. Nke ahụ na-eju m anya. Enweghi m ike ịgwa mmadụ 5,500 okwu n'otu ụbọchị mana m mere ya.
Eziokwu bụ, ịde blọgụ na-enye afọ ojuju karịa nke ọ bụla ọrụ na m na mgbe nwere. Ndị na-agụ akwụkwọ m na-ekwusara ozi bụ ndị amara, nwee nsọpụrụ, nwee nsọpụrụ, nwee ekele na eziokwu. Enyerela m ọtụtụ narị ndị na - ede blọgụ aka iji melite blọọgụ ha - ma enweghị m ike ịme nke ahụ na - enweghị enyemaka nke ndị na - ede blọgụ ahụ tupu m bụ ndị na - etinye onweghị onwe ha. Ana m ekele ha maka ịnụ ọkụ n'obi na-adịghị agwụ ike ha na-achọsi ike maka azịza anyị na-achọ. Ọzọkwa, ana m ekele ezigbo ndị enyi m na-anọgide na-agba m ume ma na-agwa m na ha maara na enwere ọtụtụ ihe na-abịanụ.
Ya mere… Obi ụtọ 500th maka unu niile. Daalụ maka ịgụ. Daalụ maka ịkekọrịta. Daalụ maka ike mmụọ m ịrụ ọrụ karịa mgbe m nwere. Gingde blọgụ abụtụbeghị ọrụ, ọ bụ agụụ m. Enweghi m ike ịnweta akwụkwọ, edemede, blọọgụ, nkọwa, ma ọ bụ teknụzụ. Ana m agwa ụlọ ọrụ ugbu a maka usoro ịde blọgụ ha - ihe m na-agatụghị eche na m ga-eme 8 ọnwa gara aga.
Dị ka Loren si tinye ya (ya mere ozugbo), M am onye na-ede blọgụ A-List. Enweghị m ike ịnọ na ndepụta anụ ahụ ọ bụla. Maka na i laghachi ma soro m na-akparịta ụka kwa ụbọchị, ị meela m nọmba 1. Anọ m ebe ahụ! Achọghị m ịma ihe ndepụta ma ọ bụ ọkwa ọ bụla na-egosi. Ejim gi ugwo karie nihi nlebara anya i nyere m.
Ana m atụ anya ịhụ ebe ihe 500 ga - esote ga - akpọrọ anyị.
Tags: Ihe ntinye ederede 500blog posts
Mar 27, 2007 na 9: 00 PM
Obi dị m ụtọ na abụghị m onye mbụ na-aza ajụjụ. Ọ bụrụ na m bụ onye mbụ, m ga-echegbu onwe gị na ị nwere ike iche na m na-ekwu okwu ka m wee nwee okporo ụzọ na blọgụ m. Kuziri m nke ahụ, my brutha. Na-aga. Mmesapụ aka gị emeela ka ị nwee ọgaranya na ndị enyi… Enwere m olile anya na ụlọ akụ gị ga-aza!
Mar 27, 2007 na 9: 08 PM
Ọbụbụenyi bara uru karịa akaụntụ akụ ọ bụla, Pat. Edegharịrị m post ahụ (tupu ị kwuo okwu) wee tụfuo njikọ na blọọgụ gị na "enyi" yabụ ị ga-enweta njikọ ahụ. Continue na-agba m ume ma na-eme ka agụụ na-agụ m. Have nwere mbido mbụ na njikọ “enyi” ọbụla n’ebe a.
Maka ndị gị amaghị Pat, anyị na-akparịta ụka na ekwentị na draịva anyị iji rụọ ọrụ wee kwuo maka otu anyị si agbanwe ụwa (ma ọ bụ na-achọ). Pat's nwere ezigbo blog - nka edere ya ka nke m mma yana ikike ijikọ akụkụ Akwụkwọ Nsọ na ndụ bụ ihe m chọrọ.
Pat malitere ọtụtụ ụlọ ọrụ na-aga nke ọma ma mara karịa onye ọ bụla ihe ndị enyi, ndị ahịa, na ahịa pụtara. Heck, o were ọbụna Colts na Superbowl! Nwoke ahụ Peyton nyeere obere aka.
Loren Feldman kwuru
Mar 27, 2007 na 8: 55 PM
Obi uto na-ekele gị !! Di egwu di egwu.
Daalụ Loren! You're bụ otu n'ime ọtụtụ ndị na-akpali mmụọ nsọ!
Mar 27, 2007 na 10: 28 PM
Ekele, Doug. Enwere m obi ụtọ ịgụ blọọgụ gị ma na-atụ anya 500 ọzọ. E nwere asịrị na-aga gburugburu na ndị na-ede blọgụ nwere ike ịnakọta ezumike nka mgbe post 1000th gasịrị - yabụ echere m na ị nọ n'oge nsogbu blog-life ugbu a. 🙂
Mar 27, 2007 na 9: 34 PM
Ekele Doug! Na-abịa a ogologo ụzọ na a nnọọ obere oge.
Dị ka i kwuru, otu ụbọchị na post na oge…
Ọ bụrụ na ọ bụghị maka ịde blọgụ, anyị agaraghị abụ ndị enyi… dị ka gị, enwere m ekele maka ịde blọgụ na njikọ m megoro n'afọ ndị gara aga…
Ọ bụ ihe na-akpali mmasị ka ihe a niile si arụ ọrụ… M na-ede blọgụ ihe karịrị afọ 9 wee zute ọtụtụ ndị mmadụ, mụtara ọtụtụ teknụzụ ọhụụ ma na-abanye n'ụgbọ ala 'ka ha na-ekwu…
Ikpeazụ, na-akpali akpali aga, M na a ụzọ na-amalite n'elu ruo n'ókè na m ọhụrụ URL… ọ ga-abụ mma n'anya na-ahụ ebe ọ bụ na a afọ oge… m nwere olileanya na ị ga-tinyere maka na-agba ịnyịnya.
Mar 27, 2007 na 9: 41 PM
Daalụ, Sean. Tụbara m ụfọdụ ezigbo SEO na CSS ndụmọdụ maka oge a ma enwere m ekele maka enyemaka niile! Also bukwa onye m na-eche IE6 (yuck!).
Na-atụ anya ụfọdụ ndụmọdụ ndị ọzọ… dị ka ịchọpụta ihe mere na ibe m ji adịkarị efu! Nye m enyemaka ụfọdụ Google-Boy!
Mar 27, 2007 na 10: 09 PM
Doug sitere na blogger 3AM ọzọ. Mee nke ọzọ Starbucks a Extra Large bụla 🙂
Mar 28, 2007 na 11: 55 AM
Ibe Indy blogger na-ekwu Hi 🙂
Mar 28, 2007 na 9: 24 PM
Ekele! Ọ bụ ihe na-akpali akpali ịhụ ịrụsi ọrụ ike niile ị tinyeworo n’ime ya n’afọ gara aga na otu o si eto ngwa ngwa. Ana m achọ biputere # 1000 nakwa.
Mar 28, 2007 na 9: 26 PM
Mar 31, 2007 na 1: 03 PM
Ezigbo ọrụ, Maazị Karr!
Mar 31, 2007 na 2: 07 PM